पूर्वराज्यमन्त्री साहको सजाय उच्च अदालतले घटायो, ११ वर्ष कैदको फैसला! | अपन जनकपुर
पूर्वराज्यमन्त्री साहको सजाय उच्च अदालतले घटायो, ११ वर्ष कैदको फैसला!
जनकपुरधाम । जनकपुर बमकाण्डमा दोषी ठहर भएका पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहलाई उच्च अदालत जनकपुरबाट फेरि राहत मिलेको छ । ज्यान मार्ने षडयन्त्र गरेको मुद्दामा उनले यसअघि पाएको जन्मकैद खारेज गरी ११ वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो ।
सोमबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इसलासले साहलाई ११ वर्ष कैद सजाय सुनाएको रजिष्टार खड्गराज अधिकारीले जानकारी दिए । जिल्ला अदालत धनुषाले ०७५ मा सोही मुद्दामा साहलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
साहमाथि दुईवटा मुद्दा थिए । अर्को मुद्दामा उनलाई बम काण्डको मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले १२ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसलाई पनि उच्च अदालत जनकपुरले केहि दिन अगाडी मात्रै घटएर सात वर्षमा झारेको छ ।
मिथिला राज्यको माग गर्दै जनकपुरको रामानन्द चोकमा बसेको धर्नास्थललाई लक्षित गरी ०६९ वैशाख १८ मा बम विस्फोट गराईंदा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा दर्जनौं व्यक्ति घाईते भएका थिए । उक्त घटनाका योजनाकार साह थिए ।
साह हाल काठमाडौंको नख्खु जेलमा छन् । धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट दुई पटक सांसदमा निर्वाचित उनी बम काण्डमा संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले भारतको दिल्लीबाट पक्राउ गरी ल्याएको थियो ।
कर्तव्य गरी बालकलाई हत्या गर्ने दोषी कारागार चलान
रेलको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा गर्ने : मन्त्री यादव
विवाहपञ्चमीको बेला जनकपुरधाम दुर्गन्धित (तस्बिरहरू)
जनकपुरका मेयर साहको राजीनामा माग्दै वडाअध्यक्षहरु काठमाडौंमा!
गणेशमान चारनाथ नगर अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रबाट महेशलाल यादव
लुम्बिनीबाट सुरु गरियो डा सीके राउत ‘जनमत माटो यात्रा’
रेल सञ्चालनमा नआउँदा गाउँमा पनि सरकारविरुद्ध लोसपाद्वारा प्रदर्शन
ओलीले गुन लगाउनुभयो, अब पालो देउवाको :- महन्थ ठाकुर